Foddaa Gargaarsa LibreOffice
Foddaan gargaartuu, fuula gargaartuu ammee filatame agarsiisa.
Kamshaanfaankishinoota barbaachisooofkessatti gargaartuu sirnaato'atu qaba:
Daawitii naanna'insaa doksee mul'isa
Gara fuulaisa duraatti siisqa
Gara fuulaitti aanuuttisiiqsa
Gara fuula mataduree gargaartuu ammeetti siiqsa
Fuula ammaa Maxxansa
Fuula kana toorbarruu kee irratti ida'a
Qaaqee fuula kana irratti barbaadi jedhu bana.
Ajaajootni kun baafata halqaraa galmee gargaartuu keessattis ni argamu.
Sirna dalagaa kee irratti mul'istuu gargaarsaa irraa gara gabatee muraatti ajajoota durtii gargalchaa waliin gargalchuu dandeessa.Fakkeenyaaf:
Fuula Gargarsaa irraa, barruu isa garagalchuu barbaaddu fili.
Fuula Gargarsaa ammee barbaaduudhaaf:
Sajoo Fuula kana irra barbaadi filadhu.
Qaaqi Fuula kana irra barbaadi nibanama.
Sanduuqabarbaadiifkeessaa, barruu argachuu barbaaddu galchi.
Dirqaalee barbaaduu/sakatta'uu itti fayyadamuu barbaaddu filadhu.
Jecha barbaaduu itti aanee dhufu fuulicha irratti argachuudhaaf, irra deebiitiibarbaadicuqaasi.
Hirdaatiin naanna'insaa foddaa gargaartuu fuuloota caancalee of keessatti qaba Qabeentoota, Kasaa, Barbaadi fi Toorbarruuwwan.
Sanduuqni tarree gubbaarra jiru iddoo ati itti kan biroo filattuLibreOffice Mojuuloota gargaartuu. Kasaa fi Barbaadiin fuuloota caancalaa mojuulii filataman qofa LibreOffice qaba.
Kasaa mata dureewwan filatamoo mojuulootaa hundaa agarsiisa.
Tarree kasaa jechoota ijoo mojuulii ammee filatame LibreOffice agarsiisa.
Barbaada barruu-guutuu raawwachuuf si hayyama.Barbaadi kun qabiyyee gargaartuu mojuulii ammee filatame LibreOffice mara dabalata
Toorbarruuwwan hiika fayyadamaa of keessatti qaba. Toorbarruuwwan gulaaluu yookaan haquu dandeessa, yookaan gara fuuloota walgitaniitti ce'uuf irratti cuqaasi.
Title is: Foddaa Gargaarsa %PRODUCTNAME